४० लाखको मेसिन दुई करोडमा खरिद ! « Nepali Digital Newspaper
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार ११:५४
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा यस मातहतका विभिन्न विभागमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका प्रसङ्गबारे पटक–पटक उजागर हुँदै आए पनि स्वास्थ्यभित्रको भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला जारी रहेको बुझिएको छ ।
यसअनुसार विशाल पण्डितको ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज’ले ४० लाख पर्ने मेसिनलाई २ करोडमा सप्लाई गर्न लागेको छ । इन्टिग्रेटेड वेष्ट म्यानेजमेन्ट अटोक्लेभ मेसिन जम्मा दुई थानलाई प्रतिथान ४० लाखका दरले बजारमा ८० लाख भन्दा बढि पर्दैन । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले सेटिङमार्फत ४ करोडमा लिएको छ । जसको सम्झौता गत ३१ गते गरिएको छ । यस हिसाबले ८० लाखको मेसिन लिँदा व्यापारीलाई ३ करोड २० लाख नाफा दिइएको छ भने राज्यको सवा तीन करोड रकम सोझै घोटला गरिएको छ । यसरी अनियमितता हुन लागेपछि सोबारे छानबिन र कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको बुझिएको छ ।
त्यसैगरी, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन बायोमेड इन्टरनेशलनका चेतन अग्रवालसँग २ थान ५ करोडमा खरिद गर्न लागिएको छ । विनासेटिङ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने अल्ट्रासाउन्ड मेसिन १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा आउँछ । २ थान अल्ट्रासाउन्ड मेसिन प्रतिस्पर्धा गराएको भए ३ करोड मूल्यमा विभागले पाउने थियो । तर सचिव चौधरीको सेटिङमा स्पेक नै बायोमेडले भित्र्याउने उत्पादक कम्पनीसँग मिल्ने गरी बनाइएको छ । यसबाट स्वास्थ्यका उच्चाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा कसरी लिप्त रहेका छन्, स्वतः प्रष्टिएको छ ।
गत वैशाख २० मा अस्पतालका उपकरणहरुको २ करोड बराबरको ठेक्का सचिव चौधरीका पीए रिजालका आफन्त पोष्टराज ज्ञवालीको लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र नेपाल ट्रेड कन्सर्नलाई दिइएको थियो । सचिव चौधरी, चौरसिया र रिजालको टोलीले बायोमेड इन्जीनियर पद्मा मिश्रलाई पनि सेटिङमा समावेश गर्दैआएको स्रोत बताउछ । जुन टीममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी पनि समेत सामेल रहेको मन्त्रालयभित्रै चर्चाको विषय बन्दै आएको छ ।
यसरी सचिवलगायतका उच्चाधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण सप्लाई गरी राज्यलाई करोडौँ चुना लगाउँदै आएका विशाल पण्डितले काठमाडौंको सिडिओ कार्यालयसँगै भब्य होटल निर्माण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको आडैनजिक भएकोले उक्त होटल सुरक्षाका हिसाबले निकै संवेदनशील रहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले कसरी नक्सा पास तथा निर्माणको अनुमति दियो– गम्भीर सवाल पैदा भएको छ ।